नेको इन्स्योरेन्स : कम्पनी विश्लेषण (सोमवार, ३ फागुन २०७७)
यस कम्पनीको आइतबार सर्वाधिक रकमको शेयर कारोबार भएको छ । कम्पनीको रु. ५२ करोड ३३ लाख ६७ हजार बराबरको शेयर कारोबार भएको हो ।
सर्वाधिक रकमको कारोबारसँगै आइतबार कम्पनीको शेयर मूल्य पनि ७ दशमलव ४० प्रतिशत बढेर अन्तिम मूल्य रु. १ हजार ६९९ कायम भएको छ । कम्पनीले हालसम्म गत वर्षको लाभांश सार्वजनिक गरेको छैन । गत वर्ष ८ दशमलव १६ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गरेको कम्पनीको हाल रु. १ अर्ब ३१ करोड ७४ लाख चुक्ता पुँजी रहेको छ ।
चालू आवको दोस्रो त्रैमाससम्म कम्पनीले रु. २६ करोड ४० लाख खुद नाफा गरेको छ । यस अवधिसम्म रु. १ अर्ब ३६ करोड ४७ हजार कुल बीमाशुल्क आर्जन गरेको छ भने रु. ४४ करोड १७ लाख कुल दाबी भुक्तानी गरेको छ । कम्पनीको जगेडा कोष रकम रु. ६४ करोड ३२ लाख रहेको छ भने बीमाकोषमा रु. ९६ करोड ३६ लाख रहेको छ ।
कम्पनीको ६२ दिनको कारोबार अवधिको अन्तिम दिनमा टुप्पी र पुच्छर भएको सेतो मैनबत्ती बनेको छ । यस्तो आकृतिले बजारमा कम्पनीको शेयर मूल्य आगामी दिनमा बढ्ने संकेत गर्छ । आरएसआई ओभरबौज्ट जोन ७८ दशमलव १९ बिन्दुमा छ ।
यसले शेयर खरिद चाप बढी रहेको देखाउँछ । कम्पनीको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन ५२ दशमलव १५ बिन्दुमा छ । उतारचढाव उच्च रहेको देखाउँछ । यस्तो अवस्थामा जोखिम पनि बढी हुन्छ भने प्रतिफल पनि बढी प्राप्त हुने गर्दछ । त्यस्तै, कम्पनीको मुभिङ एभरेज २६ दिने औसत मूल्यरेखा र १४ दिने औसत मूल्यरेखा एकअर्कादेखि टाढिएको छ ।
हालको मूल्यरेखा यी दुवै मूल्यरेखाभन्दा माथि छ । आइतबारको शेयर मूल्य रु. १ हजार ६९९ देखि बजारको अवस्था परिवर्तन भई मूल्य सस्तिए रु. १ हजार ५५४ मा टेवा पाउने देखिन्छ ।